Lesona t@ Harvey sy Irma - Dinika forum.serasera.org
Lesona t@ Harvey sy Irma
Fitohizan'ny hafatra : Lesona t@ Harvey sy Irma
Valiny : 30
rhaj0 - 12/09/2017 18:20
Ireo izany ireo Ouragans namely mafy ny tany Antilles sy Cuba sy Floride ets.. Izany no tena hoe
- orambe nahatondraka ny tany, naha-dibo-drano ny tanana efa amina 1.5 metatra
- rivotra mitsoka mafibe efa amina 300 km/h
- onjan-dranomasina avobe efa amina 15 metatra
- faharavaravana efa h@ 95%-ny tanana sasany
ka inona no lesona azo tsoahina... @ resaka Fivavahana sy Finoana?
1- Dia resa-kehy mihintsy izao tantaran'i Noah sy ny safo-dranony izao.
Samy mahita io fa safotry ny rano hatrany an-tenda ny voan'i Harvey/Irma, nefany... ny tsaramaso any Dago ho'a toa mbola maina ihany eee....
Dia hita izany fa i Noah, izay tsy mahalala afa-tsy ny 10 km à la ronde-ny, dia koditra rahefa avy ny orana tao @ tananakeliny tao moyen-orient tao. Dia mamoromporona hoe, tonga hatrany moyen-orient hono ny Lemur mivady avy any Dago, fa "mahare feo" hono izy...
2- Ny hoe Andrmntra no mamely orana na varatra moa dia tsy mila lazaina intsony. Sa indray moa hoe, ny Devoly no mpanao "ratsy" toa io? Dia resa-kehy ee...
Efa samy mahay izao hoe, ahoana no "fivadihan'izay misy eo ho ouragan", fa tsy hoe "miforona" avy @ tsy-misy indray izy io. Izao izao ny adi-hevitra be dia hoe, toa mbola misy ireo Mpino (Krisitana indrindrina) fa tsisy idiran'ny resaofema klimatika io, nefa ilay hafanana/hamandoana efa io mitohoka @ tendan'i Harvey/Irma io.
3- Dia resa-kehy koa ny hoe, "kapok'Andrmntra" rahefa misy loza toa izao izany, hoe mitily na mamely ny "finoana" tsy kristiana na mitily ny "mpanota" na mamely ny tsy-mpino
Samy mahita fa tsisy idiran'izay finoana ao Antilles (vaudou) na Cuba (communiste/atheist) sy Florida (evanzelisitra), fa voany tao daholo.
Na i Rampanana ao Key West na ny mahantra any Haiti, na ny frantsay colon tao St-Martin dia voany daholo.
Na ny mpandoa hetra na ny tsy mpandoa hetra (kebekoa miery ao Florida ao), na ny salama na ny marary...
4- Dia resa-kehy koa ny hoe, rahefa (mahay) "mivavaka" sy Minou fotsy dia miha-mety ho azy eo ny baolina.
Efa hita @ satelita io ny (ho) fandehany,
- koa inona no "angatahana" eo indray.
- na koe hoe, "misaotra an'Atra" hono fa TSY voany, na hoe, izay fa lasa ny "ratsy rehetra"
Toa tsisy re na ny zanak'i Vatican na ireo Evanjelisitra rezatra be ao Florida, fa tena samy nihidy tany @ tranom-bolamenany tany daholo ireo Belazao ireo.
Eto izao ny mampihomehy dia hoe, i Andrmnta hono "ao ambony ao", nefa toa TSY mahita ny hitan'ny satelita, ary tsy mba mitsinjo ny zanak'ondriny
5- dia inona koa ny lesona tsoahinao t@ iny?...
rhaj0 - 12/09/2017 21:18
hi hi hi ... tsy mety vita mihintsy hono izao matsirobasio (intelektoaly) eto izao..
Miharena - 14/09/2017 08:02
Mazava be ireo fahavoazana ireo izay isan'ny fikorontanana mahery vaika noho ny tokony ho izy araka ny lamina ara-natoraly.
Ny olombelona anie Rhaj0 no manao ny tsy fanao dia miova malaky ny zava-drehetra e!
Raha tsy nikapa ala rakoto fa nahay niaro ny tontolo iainana dia tsy izao no nitranga.
Fa rakoto manimba ihany, ny Devoly faly dia faly fa misy horera hatrany mba mampifalifaly ny fony ao.
Dia izay io resaka io.
Fa raha toa ka hijery ianao hoe ahoana izany hoe arovan'i Jesoa izany dia midira aloha any miaina miaraka amin'ny Kristianina dia hitanao hoe ahoana no maharo azy avy amin'ireo karazan-doza ireo.
Ohatra iray izay mihatra hatramin'izao ity : Matetika ireo nahazo fahasoavana ara-panahy dia afaka isehoan'ny fanahy (na io avy amin'ny devoly na io avy amin'i Jesoa). Satria izy efa mpanara-dia an'i Jesoa dia afaka manao defi amin'ny devoly.
Izao ary ilay nitranga : nandeha hitory teny nanangona ny olona teo amin'ny toerana iray ireo mpitory. Ny alina alohan'ny fitoriana dia nilaza taminy ny devoly hoe tsy maintsy ataonay izay hirotsahan'ny orambaratra be mba tsy ho vanona ny toriteninareo.
Dia natao ary ny fanamby. Dia tonga ny fotoana. Nisy ny rahona matevina fa nanodidina ilay toerana fotsiny ary tsy afaka niraraka raha tsy efa vita soa amantsara ny toriteny rehetra ary voampirina tsara ireo fitaovana saro-pady amin'ny hamandoana.
Fehiny : Izay mino dia manana io fahefana io.
Ny tenako dia miaina izany : rehefa tsy manana lambatsilena sy elo nefa fahavaratra dia afaka mampihantona ny orana amin'ny fotoana hiriharihana eny an-dalana tsy misy fialofana eny.
Raha ao anaty Baiboly dia ny resaka nataon'i Jesoa tamin'ny rivo-mahery teny antsambokely.
rhaj0 - 14/09/2017 13:27
Miharena Mazava be ireo fahavoazana ireo izay isan'ny fikorontanana mahery vaika noho ny tokony ho izy araka ny lamina ara-natoraly.
Inona ilay "lamina ara-natoraly" eto ry Miharena:
1- i Andrmntra "manao ny zava-drehetra" sy ny Devoly "manao ny ratsy rehetra", sa
2- klimatolozia sy meteorolozia?
Toa ilay 2- ooo???? Satria raha ilay 1- dia hohoz'ianao Miharena hoe "lamina ara-nanahary".
Bravo Miharena... Izaho indray ve hi-contredire anao @ izany
Miharena Izao ary ilay nitranga : nandeha hitory teny ... dia nilaza taminy ny devoly hoe ... Nisy ny rahona matevina fa ... tsy afaka niraraka raha tsy efa vita soa amantsara ny toriteny...
Raha ao anaty Baiboly dia ny resaka nataon'i Jesoa tamin'ny rivo-mahery teny antsambokely
Ny malaza aty k'lou, asa ho'a raha tonga tany @ vohitrakely ny vaovao, dia t@ Tsunami tany Zapan iny, dia nakorintsan'ny onja ireto olona, dia niato ihany ilay izy, ary dia falibe ireto komionitia reliziosy, fa hoe, nivaly ny vavaka nataony ary dia nitsahatra ny TSunami. Dia nihazo dongona kely hoe, hankalaza sy hisaotra ny Tompo. Fa nipaosin'ny Tsunami #2 hono ho'a izy mianakavy.
Ataovy ao ihany ry Miharena aaa... Rahefa miandrandra any an-danitra, dia ... ny hitan'ny Satelita jerena fa tsy mi-imaziner Devoly/Andrmntra mifandrirotra @ rahona sy varatra ao izany.
Miharena - 14/09/2017 19:38
Mivaona sahady ilay adihevitrao manaraka raha toa io hatrany.
rhaj0 - 14/09/2017 20:40
Rehefa mamaly tsotra ny resak'i Miharena, ka TSY araky ny hoza-dohan'i Miharena, dia lazainy fa "mivaona". Izay hono no dikan'ny "mivaona" ao @ Diksionera-Miharena.
Miharena - 14/09/2017 20:46
Raha hiteny hoe miresaka amin'adala dia mety izaho indray no mivaona kah!
fa mba mahatsiaro tena ve ianao io hoe miteniteny foana!?
rhaj0 - 15/09/2017 03:36
esy ee... rehefa oainina ry Miharena dia mba asivo ilay honnetete intelektoaly hoe, oainina ny tenabenao ry Miharena, fa tsy mahafaty anie izany ee..
Raha tsy ao ilay haonetitehy, dia ampiasao indray azany ilay hiomilitehy eee...
Sa tsy nampianarin'i Jesosy an'izany i Miharena??
Miharena - 15/09/2017 05:41
Matotra tsara io teny hoe mivaona io fa araho tsara dia ampiasao ny tsilontsaina sy ny fahatsorana mandray izay.
rhaj0 - 18/09/2017 14:19
Dia TSY mba nobitsihin'Atra ny @ haonetetehy sy hiomilitehy izany i Miharena kipantson'Atra, fa dia io Miharena mbola miziriziry manitrikitrika tsy mety diso eraky ny serasera mampiasa "tsilontsaina" io ee...
Bravo Miharena.. Izaho indray ve no hitazona anao tsy hanao izany
Fa ny fehin'ity resaka ity re ry Miharena dia hoe:
Rahefa miandrandra any an-danitra, dia ...
- ny hitan'ny Satelita jerena
- fa tsy mi-imaziner Devoly/Andrmntra mifandrirotra @ rahona sy varatra ao izany.
Miharena - 18/09/2017 16:33
Ny satelita dia solomason'ny olona satria izy tsy mahay manidina raha tsy manana finoana.
Ny an'Andriamanitra indray na aiza na aiza haiNY ny mijery na ny ivelany na ny any anaty fanahinao any.
Dia io koa ananan'ny mino dia vakiany fotsiny izay zava-miafina ary azony atao tsara ny manazava ny fampahanginana ny rivotra be eny amin'ny ranomasina.
Fa ny olona tsotra no mila fitaovana hijerena ireny.
Aoka fotsiny ho fantatrao Rhaj0 fa matoa mahay zavatra ny olona, toy ireny satelita ireny dia satria efa nanao azy ho tonga lafatra ny Mpahary dia mahay ireny izy.
Fa Rhaj0 moa tsy mino Mpahary dia niforomporom-potsiny tsy ny famolavolana maty paika.
rhaj0 - 18/09/2017 16:46
Dia lazaovy fa Atra indray no "nampamorina" ny Siantista (Atheista ny ankamaroany) ny Satelita.
Sa indray, ny Satelita "noforonin'Atra" no mitazona ny orana tsy hilatsaka "ambara-pahavitan'ny vavaka ataon'i Miharena".... "maty paika".
Miharena - 18/09/2017 16:51
Tsy voavolavola maty paika ilay teny teo aloha.
Tsy ny teknolojia no olana fa ilay mihevitra fa tsy nisy Mpahary azafady ary tsy miaiky fa na mahay teknolojia aza ny voary noforoniNY dia tsy mahasehaka AZY Mpamorona rehefa anehoaNY fahagagana.
rhaj0 - 19/09/2017 14:33
rhaj0 Rahefa miandrandra any an-danitra, dia ...
Inty izao misy fanadihadiana an'i Katrina
Dia inona hoz'i Miharena ny hidiran'ny Mpahary @ izao??
Inona no ataon'izao Mpahary-nao izao, itazonaNY ny orana tsy hilatsaka "ambara-pahavitan'ny vavaka ataon'i Miharena" ???
Dia efa mararicoco mihintsy 'nareo 'zalahy..
Miharena - 19/09/2017 15:29
Angaha ny olona tany moa nangataka ny hovonjena amin'io loza io?
Maro ihany ankehitriny ny toerana lasa manangon-doza noho ny tsy fibebahana.
Nisy tantaran'i Ninive ohatra, rehefa nisy faminaniana ny handringanana ny tanana dia nibebaka daholo noho ny ratsy natao dia namindrana fo ary tsy noripahana.
Amin'izao fotoana izao, mamaky fotsiny ny teknolojiany ny miseho mahay fa tsy manontany ny Mpahary amin'ny tokony hiarovana azy ireo. Mahay tsinona hono e!
Ny marary anie izao dia ireo tsy mibebaka ireo mba hositranina raha ny tokony ho izy fa tsy ny Krsitianina izay mahalala ny inoany ka mahavita miaro ny tenany tsy ho voan'ny fandringanana tsy nahy na tampoka e!
rhaj0 - 19/09/2017 16:28
vao mainka loza... Rahefa "mibebaka" hono ry Miharena, dia tazomin'izao Mpahary-ny ao izao ny orana TSY ho avy "eo ambony lohan'i Miharena", ambara-pahavitan'ny bebak'i Miharena. Fa ny manodidina sy ny hafa rehetra (tsy mibebaka) dia petsa daholo.
bon dié... koa na ny zaza eny @ garabola azany ve hieritreritra toa izany..
Miharena - 19/09/2017 16:38
Ny zaza garabola dia tsy manantsiny ary mahalala kokoa ny zava-miafina fa Rhaj0 be saina mihevitra azy mahay miankina amin'ny fitaovam-pandrefesana ihany hono no mahay!
Izany hoe raha tsy nisy olombelona namorona ireny karazam-pitaovana ireny mba hiomankomanana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro dia zero manatody ny karazan'olona toa an-dRhaj0.
Maro anefa no tsy mampiasa ireny fa dia fantany soa aman-tsara hoe ho avy io orana io anio, na koa hoe hisy rivo-doza hitranga. Azo raisina izay niainan'ny ntaolo mpiandriaka sy ireo mpiandriaka marobe tsy manana radio.
rhaj0 - 19/09/2017 17:36
hi hi hi.. tahaka an'i Noah ve izany? Tsy mila izay tekinaolojia any, fa manontany ny goaika hijery raha maina ny tany?
raha ny marina, tahaka an'Atr'i Noah ve? Tsy mila izay tekinaolojia any, fa mampaniraka an'i Noah hanontany ny goaika hijery raha maina ny tany?
Miharena - 19/09/2017 19:13
Fa raha niresaka tamin'i Noah angaha IZY tsy hafa kely no endrika nitondrany izany?
Toy izany koa ny endrika iresahan'i Jesoa amin'ny olombelona ankehitriny, tsy takatry ny teknolojia ka hoe hampiasa satelita IZY vao afaka hiresaka fa tonga dia tonga miboroaka avy ao antafotranonao IZY dia miresaka aminao. Tsy rava ilay tafo amin'io an!
Misy koa endrika iresahaNY avy hatrany dia bitsika ao anatinao ao, tsy mila teknolojia radio na finday.
rhaj0 - 19/09/2017 21:53
Ka niresaka t@ Noah ve azany Atra ry Miharena aa??...
Toa vendrana be IZY izany, f'angaha IZY "ao ambony ao" tsy mba nahita ny hitan'ny satelita???
TSY mba afaky ny tonga dia "nibitsika" t@ Noah angaha IZY, hoe, afaka 40 andro dia maina ny tany fa tsy mila mandefa goaika eee...
Fa ilay "Atra mikondingy avy ao @ tafotrano" izay moa no nampinoan'i TSaratsara anao Miharena ao??
TEna nidiran-doza mihintsy 'le Miharena 'ty..
O ry namana (Kristiana tsara sitrapo) eto @ serasera ooo... tena mila vonjenareo i Miharena havanareo eee... aza jerena fotsiny izy ao io rey olona fa lelafin'ny saka ny faladianareo eee.. Efa miezaka foana ihany aho, fa tena kay lalina be ny lavaka misy azy ao eee...
Raha nareo angamba no miteny dia mety hiasa ihany ny cocokeliny kouh...
Page rendered in 0.0482 seconds